Gbanwee olu na Sony Vegas
Sony Vegas na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ọ bụghị naanị na vidio, kamakwa na ntaneti. Na nchịkọta akụkọ, ịnwere ike ịkpụ ma tinye mmetụta na ụda ahụ. Anyị ga-eleba anya na otu n'ime mmetụta dị egwu - "Igbanwe ụda", nke ị nwere ike ịgbanwe olu. Otu esi agbanwe olu gị na Sony Vegas 1. Bulite vidiyo ma ọ bụ egwu egwu na Sony Vegas Pro ebe ịchọrọ ịgbanwe olu gị.
Na Sony Vegas Pro, ị nwere ike ịhazigharị agba nke vidiyo ndị e dekọrọ. A na-ejikarị emegharị nsụgharị nsụgharị na-emekarị ọ bụghị naanị na ihe onwunwe egwu. Na ya, ị nwere ike ịtọ ọnọdụ ụfọdụ ma mee ka foto ahụ dị ụtọ karị. Ka anyị lelee otu esi edozi agba na Sony Vegas. Na Sony Vegas ọ dịghị otu ngwá ọrụ nke ị nwere ike isi mee mgbazi agba.
Ọtụtụ mgbe na usoro nke ịmepụta vidiyo na Sony Vegas, ị ga-ewepụ ụda nke akụkụ dị iche nke vidiyo ahụ, ma ọ bụ ihe osise dum. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị kpebie ịmepụta vidiyo vidiyo, mgbe ahụ, ịnwere ike iwepu egwu egwu site na faịlụ vidiyo. Mana na Sony Vegas, ọbụna nke a dị mfe nghọta nwere ike ịjụ ajụjụ.
Sony Vegas Pro nwere ụdị ngwaọrụ dị iche iche. Ma ị maara na enwere ike ịgbasawanye ya. Emere nke a site na iji plugins. Ka anyị leba anya n'ihe plugins dị na otu esi eji ha. Kedu ihe bụ plugins? Ngwaọrụ bụ mgbakwunye (mmebawanye ohere) maka usoro ọ bụla na kọmputa gị, dịka ọmụmaatụ Sony Vegas, ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ na Intanet.
Otu esi eme mgbanwe na Sony Vegas
Ndagharị vidiyo na otu etiti Sony Vegas
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta vidiyo na-egbuke egbuke ma na-adọrọ mmasị na Sony Vegas, mgbe ahụ, ị ​​ga-eji mmetụta dị mma na usoro nhazi. Taa, anyị ga-ele anya iji mee otu n'ime usoro kachasị mfe na Sony Vegas - na-egwu ọtụtụ vidio na otu etiti. Otu esi tinye otutu vidiyo na otu osisi na Sony Vegas Pro Iji gbakwunye vidio na vidiyo na Sony Vegas, anyị ga-eji ngwá ọrụ "Panning and cropping events ..." ("Omume Pan / Ubi").
Otu esi ewepu video na Sony Vegas Pro
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ vidiyo ahụ ngwa ngwa, wee jiri editọ vidiyo vidiyo na Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro bụ ọkachamara na-edezi vidio ọkachamara. Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịmepụta ọkwa dị elu nke ihe nkiri ahụ. Ma enwere ike ime ya na vidiyo dị mfe na-agbanye naanị n'ime nkeji ole na ole.
Mgbapeanya ụda na Sony Vegas
Mmetụta dị otú ahụ dị ka attenuation nke ụda ahụ ga-eme ka ị lekwasị anya na isi ihe nke ndekọ ndekọ. Dịka ọmụmaatụ, n'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịhọrọ dialogs, na-eme ka olu ahụ na-amụba na mmalite, na njedebe na-agbada. Tụlee otú ị ga-esi tinye mmetụta nke attenuation nke ụda na Sony Vegas. Kedu otu esi eme ka attenuation dị mma na Sony Vegas?
Otu esi eme otu intro na Sony Vegas
Intro bụ obere obere vidiyo ị nwere ike itinye na mmalite nke vidiyo gị ma nke a ga-abụ "mgbawa" gị. Ntughari a kwesiri ighota ya ma obu echefu echefu, n'ihi na vidiyo gi ga amalite ya. Ka anyị leba anya otu esi emepụta mmeghe na Sony Vegas. Kedu otu esi emeghe ihe na Sony Vegas? 1. Ka anyị malite site na ịchọta ndabere maka ntinye anyị.
Kedu otu esi eme ka vidio vidiyo na Sony Vegas?
Mgbe edezi vidio, ọ na-adịkarị mkpa imepụta mmetụta nke ọdịdị dị mma na nhụhụhụ nke vidiyo. A na-akpọ mmetụta a Fade. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji mee ka vidiyo gbanye na Sony Vegas Pro. Kedu ka esi eme ka vidio vidiyo na sony vegas? 1. Nke mbụ, bulite vidiyo ahụ na nchịkọta vidiyo nke ịchọrọ ịhazi.
Ọgba Ọkụ Anya maka Sony Vegas
Mgba Ọkụ Anya - nkwụnye mgbazi agba maka Sony Vegas, nke na-enye gị ohere ịmegharị vidiyo dị ka ịchọrọ: mee ka foto ahụ dị ka ihe nkiri ochie, gbanwee nkwonkwo ahụ, mee ka agba ndị ọzọ jupụta, ma ọ bụ, ọzọ, gbanye okpokoro dị ọkụ. Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-enyo enyo na-emetụta akụ na ụba ya, ihe ndozi nke edoziri nke ọma ga-eme ka ọ dịkwuo mfe ịrụ ọrụ.
Kedu otu esi eme video na Sony Vegas?
O yikarịrị ka enwere nsogbu ụfọdụ site na usoro dị mfe nke ịdebe vidiyo: pịa na bọtịnụ "Save" na ịmeela! Mana ọ bụghị, Sony Vegas adịghị mfe ma ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọrụ nwere ajụjụ ezi uche dị na ya: "Olee otu ị ga - esi zọpụta vidiyo na Sony Vegas Pro?". Ka anyị hụ! Ntị!
Kedu esi agbanye vidiyo na Sony Vegas?
Wepu black bars na n'akụkụ nke vidiyo, n'ezie, ọ bụghị nnukwu ihe maka ndị ọrụ dị elu. Ndị ọrụ nkịtị, dịka iwu, ọ na-esiri ike idezi vidiyo nke na ọ na-arụ na ihuenyo zuru ezu. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi na-emeso ha ụtarị ojii na n'akụkụ ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ na Sony Vegas Pro siri ike ịwụnye, mgbe ahụ, ihiere. Ma n'agbanyeghị ihe niile dị mfe, anyị kpebiri ide otu edemede ebe anyị ga-aga site na ụkwụ na-agwa anyị otu esi esi wụnye editọ editọ vidio a. Olee otú iji wụnye Sony Vegas Pro 13? 1. Iji malite, pịa njikọ dị n'okpuru ebe isiokwu dị na nchịkọta nchịkọta vidiyo.
Kedu nke ka mma: Adobe Premier Pro ma ọ bụ Sony Vegas Pro?
Ajụjụ kachasị mma: Sony Vegas Pro ma ọ bụ Adobe Premier Pro - ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị. N'isiokwu a, anyị ga-agba mbọ iji tụnyere ndị editọ vidio abụọ ahụ na mpaghara ndị ọzọ. Ma echela oke nchịkọta vidiyo, nke dabeere na isiokwu a. Ntuziaka Ma na Adobe Premier na Sony Vegas Pro ọrụ nwere ike hazie interface maka onwe ha.
Anyị na-ewepụ njehie nke koodu codecs na Sony Vegas
Sony Vegas bụ onye nchịkọta vidio dị egwu na, ma eleghị anya, ọ bụla nke abụọ zutere njehie na-esonụ: "Ịdọ aka ná ntị! Njehie mere mgbe ị meghere faịlụ ma ọ bụ ọtụtụ. N'isiokwu a, anyị ga-anwa inyere gị aka dozie nsogbu a otu ugboro. Hụkwa: Ntak Sony Vegas anaghị emeghe usoro *.
Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịṅa ntị na akụkụ ọ bụla nke vidio ahụ, a ga-ebute ya ma gosipụta ya na ihuenyo dum. Ị nwekwara ike ịmepụta akụkụ nke vidiyo site na iji Sony Vegas. Tụlee otú e si eme nke a. Kedu esi eweputa vidiyo na Sony Vegas? 1. Bulite faịlụ vidiyo na Sony Vegas nke chọrọ ka a hazie ya wee pịa bọtịnụ "Panning and cropping events ...".
Otu esi agba ọsọ ma ọ bụ belata obere vidiyo na Sony Vegas
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na-edezi ma na-amalite ịmatakwu onye editọ vidiyo dị ike na Sony Vegas Pro, mgbe ahụ, n'ezie, ị nwere ajụjụ gbasara otu esi gbanwee ọsọ nke nlọghachi vidio. N'isiokwu a, anyị ga-agbalị inye azịza zuru ezu ma zuru ezu. E nwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi mee ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa na Sony Vegas.
Kedu ka esi tinye ihe odide na Sony Vegas?
Sony Vegas Pro nwere ọtụtụ ngwaọrụ maka ịrụ ọrụ na ederede. Ya mere, ị nwere ike ịmepụta ihe odide mara mma na nke na-egbukepụ egbukepụ, tinye mmetụta n'ahụ ha ma gbakwunye ihe nkiri dị n'ime nchịkọta vidiyo. Ka anyị chọpụta otú e si eme ya. Esi tinye mgbakwunye 1. Iji malite, bulite faịlụ vidiyo iji rụọ ọrụ na nchịkọta akụkọ.
Otu esi eme ngwa ngwa na Sony Vegas
Ugboro ugboro, ndị ọrụ nwere ajụjụ banyere otu esi eme ka ọsọ ọsọ nke vidiyo (zọpụta). E kwuwerị, ogologo oge vidiyo na ihe ndị ọzọ na ya, ogologo oge a ga-edozi ya: vidiyo nke minit 10 nwere ike ịtụgharị maka ihe dị ka elekere. Anyị ga-agba mbọ belata oge ejiri na nhazi.
https://termotools.com ig.termotools.com © Sony vegas 2020